စီးပွား​ရေးလုပ်ငန်းအရဖြစ်စေ၊ အပန်းဖြေ အလည်အပတ်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း ခရီးသွားလာနေစဉ် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မတော်တဆမှုများ နှင့် ပြင်ပမှ မြင်နိုင်သော အန္တရာယ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
အကျိုးခံစားခွင့် အကာအကွယ် တစ်ဦးချင်းအတွက် မိသားစုအတွက်
အခြေခံ မတော်တဆ သေဆုံးခြင်း 10,000,000 ကျပ် 10,000,000 ကျပ် (လူကြီးတစ်ဦးလျှင်) 3,000,000 ကျပ် (ကလေးတစ်ဦးလျှင်)
ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးရုံစရိတ်နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (အသက် ၇၀ အရွယ်အထိ) 10,000,000 ကျပ် အထိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပေါ် မူတည်၍ ပေးလျော်ပါသည်။ 10,000,000 ကျပ် (လူကြီးတစ်ဦးလျှင်) 3,000,000 ကျပ် (ကလေးတစ်ဦးလျှင်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပေါ် မူတည်၍ ပေးလျော်ပါသည်။
တစ်ပါးသူထိခိုက်မှုအတွက် (အာမခံထားသူ၏ သတိမမူမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ပါးသူထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် ပေးလျော်ပါသည်) အများဆုံး 100,000,000 ကျပ်အထိ အများဆုံး 100,000,000 ကျပ် အထိ
အပိုအကာအကွယ် ကလေးပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ (အာမခံထားသူမတော်တဆသေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့လျှင် အသက်ရှင်ကျန်ရှိသော ကလေးများ၏ ပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း 3,500,000 ကျပ် 3,500,000 ကျပ်
၁။ နဂိုရှိရင်းစွဲ ​ရောဂါလက္ခဏာများ
၄။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ AIDS (သို့) ARC၊ HIV စသော ​ေရာဂါများကြောင့် ထိခိုက်မှုများ
၈။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ​ရောဂါများဖြစ်သည့် စိတ်မတည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်မှု စသည့် လက္ခဏာများ
၁၀။ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ၊ မော်တော်ကားပြိုင်ပွဲ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ကျောက်တောင်တက်ခြင်း၊ တွင်းတူခြင်း၊ လေထဲခုန်ချခြင်း၊ လေထီးခုန်ခြင်း၊ ​ရေငုပ်ခြင်း၊ အမြင့်ခုန်ခြင်း၊ အမြင့်ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း နှင့် လေပူဖောင်းစီးခြင်းစသည့် အန္တရာယ်ရှိ အားကစားနည်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်မှုများ
၁၅။ နျူကလီးယားလောင်စာများ (သို့) ​ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဓာတ်​ရောင်ခြည် (သို့) ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများ
၁။ ပြည်တွင်းခရီးသွားအာမခံက ဘာလဲ?
သင့်ခရီးစဥ်သည် သင့်အိမ်မှကီလိုမီတာ ၅၀ ထက်ကျော်လွန်ပါက အကာအကွယ်ပေးမည့် အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အာမခံအကာအကွယ်က ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ?
AYA GO ခရီးသွားအာမခံကို အနည်းဆုံး ၁ ရက်မှ အများဆုံး ၃၁ ရက်ဆက်တိုက်ကာလအထိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ အာမခံအကာအကွယ်က ဘယ်အချိန်စတင်မလဲ?
သင်၏နေအိမ် သို့မဟုတ် အာမခံဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် စတင်မည့် နေရာမှ စတင်ထွက်ခွာသည့်အချိန်မှစ၍ (သတ်မှတ်ထားသည့် ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီထက် စော၍ဖြစ်စေ၊ ​ခရီးရောက်ရှိမည့်နေရာသို့ ၂၄ နာရီထက်နောက်ကျ၍ဖြစ်စေ အကာအကွယ် အကျုံးမဝင်ပါ။) သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်ရောက်ရာနေရာသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၄။ ပရီမီယံကြေးကို ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ?
၅။ သက်တမ်းတိုးလို့ ရပါသလား?
၆။ ခရီးသွားအာမခံကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ခရီးစဉ်အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
ခရီးသွားကာလ သို့မဟုတ် ဦးတည်ရာနေရာများကို ခရီးစဥ်မစတင်မီရက်မတိုင်ခင် (၂၄) နာရီ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၇။ အဓိက လျော်ကြေးအကျုံးမဝင်တဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
၈။ လျော်ကြေးတောင်းခံမည်ဆိုပါက ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းတွေ လိုအပ်မလဲ?
AYA GO (ပြည်တွင်း)
၉။ သတိထားသင့်တဲ့ အဓိက အချက်အလက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ?
၁၀။ ခရီးသွားအာမခံအကြောင်းကို ထပ်သိချင်ရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းနိုင်မလဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရဖြစ်စေ၊ အပန်းဖြေ အလည်အပတ်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း ခရီးသွားလာနေစဉ် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မတော်တဆမှုများ နှင့် ပြင်ပမှ မြင်နိုင်သော အန္တရာယ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
အခြေခံ မတော်တဆ သေဆုံးခြင်း 10,000,000 ကျပ် 10,000,000 ကျပ် (လူကြီးတစ်ဦးလျှင်)
3,000,000 ကျပ် (ကလေးတစ်ဦးလျှင်)
ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးရုံစရိတ်နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (အသက် ၇၀ အရွယ်အထိ)
10,000,000 ကျပ် အထိ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပေါ် မူတည်၍ ပေးလျော်ပါသည်။
10,000,000 ကျပ် (လူကြီးတစ်ဦးလျှင်)
(အာမခံထားသူမတော်တဆသေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့လျှင် အသက်ရှင်ကျန်ရှိသော ကလေးများ၏ ပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
3,500,000 ကျပ် 3,500,000 ကျပ်
၁။ နဂိုရှိရင်းစွဲ ေရာဂါလက္ခဏာများ
၄။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ AIDS (သို့) ARC၊ HIV စသော ေရာဂါများကြောင့် ထိခိုက်မှုများ
၈။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများဖြစ်သည့် စိတ်မတည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်မှု စသည့် လက္ခဏာများ
သင်၏နေအိမ် သို့မဟုတ် အာမခံဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် စတင်မည့် နေရာမှ စတင်ထွက်ခွာသည့်အချိန်မှစ၍ (သတ်မှတ်ထားသည့် ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီထက် စော၍ဖြစ်စေ၊ ခရီးရောက်ရှိမည့်နေရာသို့ ၂၄ နာရီထက်နောက်ကျ၍ဖြစ်စေ အကာအကွယ် အကျုံးမဝင်ပါ။) သတ်မှတ်ထားသော ဆိုက်ရောက်ရာနေရာသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။